Iwe wakanzwa runyerekupe: Apple iri kuyedza kugadzirisa mota, kana zvirinani ndizvo zvinoratidzirwa nekubuda kwese uye runyerekupe. Uye pane kuve mota yakazvimiririra zvachose mukusimudzira, runyerekupe runoratidza kuti ichave mota yekutakura vanhu yekutenga.
Mishumo yakati wandei kubva kumakore mashoma apfuura yakataura kuti Apple haisi kungoisa poaching vashandi veTesla chete uye nekuhaya nyanzvi dzemotokari, asi zvakare yakavanda pakavanda nzvimbo yekutsvagisa yakazadzwa nemazana evashandi veApple vachishanda muchirongwa chinonzi Titan, kunyange yakazoita swathe redundancies kubva muchirongwa. Nekudaro zvinhu zvinoita kunge zvakamutsidzirwa kusvika padanho rakakura sezvaunenge uchiverenga.
Izvi ndizvo zvaunofanira kuziva.
Chii chinonzi Project Titan?
Project Titan kuyedza kusimudzira yakazvimirira kutyaira masisitimu
Yakatanga seyemagetsi mota chirongwa
Apple yakatanga kushanda pa "Chirongwa Titan"Imwe nguva mu2014 uye pane imwe nguva yaive nevashandi vangangoita chiuru vachigadzira mota yemagetsi pabazi rakavanzika padyo nemuzinda wayo weCupertino.
Iyo purojekiti yakatukwa, kana uchida, nedrama yehutungamiriri nemamwe matambudziko, izvo zvakatungamira kuApple kuimisa nekumisa mazana evashandi. Muna 2016 yakashandisazve basa renguva refu Bob mansfield kutungamira iko kuedza. Mansfield akachinja kutarisisa kwaApple mukugadzira yakazvimirira kutyaira system.
Nepo hutungamiriri hwaTitan hwaenda kuGiannandrea's AI uye neboka rekudzidza zvemuchina, runyerekupe runopfuurira rweApple kuvhura mota yakaita seTesla muna 2024.
Nepo vamwe vachiti Apple iri kungovandudza tekinoroji yekuzvityaira, vamwe vachiri kungo chengetedza kuti kune mota mukusimudzira, vachitaura kuti Apple yanga ichimisikidza vatengi vekudyidzana Zvakaoma kuve nechokwadi chero nzira, kunyangwe zvakasikwa, chero mota yakatangwa naApple yaizoshandisa yega-yekutyaira tech ichigadzirwa. Uye muna Zvita 2020, Reuters yakataura vanhu vaviri vayakange vataura navo nezve chirongwa ichi. Vakapa zano mota yeApple ichave iri kugadzirwa na2024.
Hyundai yakasimbisa kuti yaive mukukurukurirana neApple pahunyanzvi hwekuzvimiririra usati wajekesa chinzvimbo chayo uye ichiti Apple yaive mukukurukurirana nemamwe makambani, futi.
Ndeipi hunyanzvi hwekuzvimiririra huri kuvandudza Apple uye kuyedza?
Shanda kuvandudza mashandiro muCanada
Kuedzwa kwakaitikawo mumigwagwa yeCanada
Muna 2019 Apple yakatenga Drive.ai
Apple sezviri pachena ine zvikwata zvinoverengeka zvinoshanda pazvikamu zvakasiyana zve software. Kune timu muCanada iri kusimukira hwaro hwekushandisa system, Semuyenzaniso. Apple yakapihwawo mvumo muna2017 kubva kuCalifornia DMV yekuyedza mota dzinozvityaira mumigwagwa yeruzhinji vachishandisa akati wandei 2015 Lexus RX450h maSUV akabhadharwa kubva kuHertz.
apuro yakagadzirirwa maLexus SUV akati wandei ine akasiyana maseru akasiyana achimhanya ayo ega-kutyaira software. Iri zvakare kushanda pane yega-kutyaira shuttle sevhisi yakagadzirirwa kutakura vashandi pakati pemahofisi eApple muSilicon Valley.
MunaJune 2017, Apple CEO Tim Cook yasimbiswa Apple iri kutarisa kumasisitimu akazvimiririra uye yakaratidza kuti basa rinogona kushandiswa kune zvimwe zvinoshandiswa kupfuura mota. “Masisitimu anokwanisa kuzvimiririra anogona kushandiswa nenzira dzakasiyana - mota inongova imwe chete, asi kune nzvimbo dzakasiyana dzayo. Uye handidi kuenda kumberi neizvozvo, ”akatsanangura Cook.
MunaJune 2019 takawana zvechokwadi kuti Apple yakanga ichiri kuda kufamba kwakazvimiririra nekuti yakatenga Drive.ai, kutanga kwaive kuchimhanyisa zvirongwa zvekutyaira zvemota dzinozvimiririra muTexas. Iyo kambani yakamira kushanda, asi Apple yatora mota nemainjiniya.
Zvakare sekureva kwevaongorori Morgan Stanley, Apple ichashandisa madhora anosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe pakutsvagisa nekusimudzira muna 19, zvichienzana nechikamu cheshanu cheR & D yese yakashandiswa muindasitiri yemotokari (madhora zana emabhiriyoni emadhora). Zvinoshamisa zvechokwadi. Kubva zvatakaziva kuti Apple yakatumira mazana emabasa panguva ya2020, mamwe acho akatsanangura basa remotokari.
Nguva yenguva yeApple mota makuhwa
Dzese runyerekupe dzakatenderedza Apple's mota chirongwa.
23 Ndira 2021 - Apple inotumira mazana matatu emazita emabasa
Analytics yakasimba GlobalData vakaona kuti Apple yakatumira anopfuura mazana matatu emabasa muna 300, inosanganisira "akakosha mabasa anoratidza kushanda pabhatiri manejimendi manejimendi, kuchengetedzwa kwemugwagwa, uye ruzivo rwemotokari". Izvi zvaive zviri zvese zvemubhadharo mutsva mukati meApple's Special Project Boka, kana SPG, yakasarudzika unit kuCupertinoino-baed kambani inoshanda chete pazvinhu zvinotyisa, zvitsva zvirongwa.
8 Ndira 2021 - Apple iri kusimudzira yega-kutyaira mota yemagetsi neHyundai?
(Pocket-lint) - Apple inonzi iri kuita hurukuro naHyundai kuburitsa yakazvimiririra yemagetsi mota. Korea Economic Daily yakatanga kutaurisa hurukuro yavo "yekutanga" China. Hyundai akazosimbisa chiitiko ichi kuBloomberg, achiti: "Apple neHyundai vari kutaurirana, asi sezvo kuri padanho rekutanga, hapana chakagadziriswa." Asi Hyundai akazowedzera kujekesa chirevo ichi, achiudza CNBC kuti: "Tinonzwisisa kuti Apple iri mukukurukura nevezvigadziri vepasi rose, kusanganisira Hyundai Motor."
22 Zvita 2020 - Reuters inoshuma Apple ichagadzira mota yevanofamba na2024 ine 'inotevera-chikamu' bhatiri tech
Reuters yakataura nevanhu vaviri padhuze neProjekti Titan uye inoshuma kuti mota yeApple ichave iri kugadzirwa na2024 ine "inotevera nhanho" tekinoroji tekinoroji ine mutengo wakaderedzwa uye yakawedzera renji. Nekudzivirira kwekusahadzika, masosi anoti mota ichave iri yemotokari yevatakuri kutanga kumusika wevazhinji.
09 Zvita 2020 - Mishumo yeApple inogadzira mota yekupa cheni pamusoro
Chirevo kubva kuDigitimes chinoratidza kuti Apple yakagadzira fekitori yemotokari uye iri kutanga vatengesi. Iko kune zano rekuti TSMC ichabatanidzwa kune yega-kutyaira mota machipisi. Iyo indasitiri yezvinhu, inonzi, inotaura kuti mota yeApple ichave yakafanana naTesla uye kuti nguva yacho inoratidza kuvhurwa kwe2024-25.
08 Zvita 2020 - Mota unit ikozvino inotungamirwa naAI mukuru
A mushumo kubva kuBloomberg ruzivo rwekuti yega-yekutyaira mota unit yakafamba pasi pekutonga kwaJohn Giannandrea, Apple's artificial intelligence executive.
21 Chivabvu 2020 - Apple ichatarisa kudzora ese maficha eayo anozvimiririra mota tech
Sekureva kwechinyorwa chekutsvagisa chaMorgan Stanley Apple icha "inoda kudzora dhizaini, chivindi uye zviitiko uye masevhisi pamusoro pechikuva." Saka zvinoreva here kuti ichagadzira mota yese pachayo? Pamwe kwete, asi mukana uripo.
21 Kubvumbi 2020 - Apple inoteedzera patent yewindows-tinting tech
Zvichida zvine chekuita, pamwe kwete, asi Apple yakaita akaisa patent yekugadzirisa tint ye windows mu "mota nezvivakwa" uchishandisa akati wandei magirazi mukati megirazi. Apple inoita mareferensi akati wandei kumotokari dziri patent kufaira.
26 Chikumi 2019 - Apple ichiri kushanda pachayo-yekutyaira tekinoroji
Apple yakatenga Drive.ai, kutanga kwave kuchimhanyisa zvirongwa zvekuchaira zvemota dzinozvimiririra muTexas. Ipo Drive.ai yamisa mashandiro ayo, Apple ikozvino ine zvikepe zveDrive.ai zvemota dzinozvimiririra uye zvimwe zvinhu zvinosanganisira mainjiniya.
10 Nyamavhuvhu 2018 - Aimbove mainjiniya weTesla anotungamira iye zvino anoshanda paProjekti Titan
The kushandwazve basa kweTesla's Doug Munda zvinogona kureva kuti Apple Mota zvirongwa zvakanyanya kudzoka kumberi kupisa. Munda wakasiya Apple muna 2013, kuti ushande naTesla uye waive mutariri weModel 3 kugadzirwa kukambani yemagetsi yemagetsi.
15 Chikumi 2018 - Apple inoshandira Waymo mainjiniya
apuro akavanda mainjiniya wepamusoro-soro weGoogle / Alphabet's Waymo yekuzvityaira mota kuedza kufamba kunoratidza kukura kwaApple kwekuedza kuzvitonga.
16 Chivabvu 2018 - Apple ine makumi matanhatu nemaviri yekuzvityaira mota muCalifornia
Muna Chivabvu 2018 Apple yaive nemotokari makumi matanhatu neshanu nemadhiraivha makumi mapfumbamwe nematanhatu anowanikwa kuyedza mota dzakazvimiririra, iyo California department of Motor Vehicles (DMV) yakati ichipindura mibvunzo kubva macReports. Kufamba kunotevera kubva kune mimwe mishumo pakutanga kwegore.
15 Mbudzi 2017 - Apple inoti yega-kutyaira mota software inovandudza zvipingamupinyi kuona
Apple vatsvagiri vakakwanisa kubudirira "Inokurudzira zvikuru mibairo" yekuona vanofamba netsoka uye mabhasikoro neLiDAR nekuda kwesoftware nyowani. Onawo Nyowani Apple SUVs neLIDAR dzakaonekwa
12 June 2017 - Apple ichishanda naHertz pakuyedza
Apple iri kushanda naHertz pakuyedza nekugadzirisa yayo yega-drive test zvikepe - Apple inonzi yakhaya Lexus SUVs kubva kuHertz manejimendi manejimendi.
5 Chikumi 2017 - Tim Cook anoti Apple yakanangana nehurongwa hwekutyaira hwega
Tim Cook anodaro Apple yakanangana nekuzvidzivirira kwekutyaira masisitimu muhurukuro naBloomberg. "Tiri kutarisa masisitimu anozvitonga," akadaro Cook mumashoko ake akanyatsojeka nezvezvirongwa zveApple zvemotokari. "Unyanzvi hwehunyanzvi hwatinoona hwakakosha zvikuru."
4 Mbudzi 2015 - Fadell anotaura nezve nzira yemota yaApple
Tony Fadell, anozivikanwa sa "baba vePod", akaonekwa pamusoro Bloomberg TV kukurukura nguva yake kuApple. Munguva yekubvunzurudzwa, akaburitsa pachena kuti akataura neyaimbova Apple CEO Steve Jobs muna2008 nezvekuti Apple angasvika sei muchirongwa chemotokari.
Asi Apple yanga isina zviwanikwa zvakakwana zveiyo purojekiti ipapo. Fadell akatsanangura kuti: “Takambofamba famba, uye izvi zvaive muna 2008, zvekuti dai taizovaka mota, taizovaka chii? . Unoziva. Zvingave zvakanaka kuzviita, asi isu hatigone. ”
19 Gumiguru 2015 - Kutanga kunopomera Apple kune poaching tarenda
Motokari yemagetsi kutanga Mission Motors yakasiya mashandiro, uye yakapa Apple mhosva yekubata tarenda rayo rakakosha, maererano neReuters. Apple yakadzora mainjiniya matanhatu kubva kuSan Francisco-based startup asi haana kumboedza kuwana Mission Motors chaiko. Iwo mainjiniya anonzi ane hunyanzvi mumagetsi dhiraivha masystem uye bhatiri algorithms yekuchaja uye kutonhora.
21 Gunyana 2015 - Kuumba timu
Apple inonzi yakapedza rinopfuura gore ichiongorora kuti chirongwa cheApple Car chaigona kuitika here. Iyo kambani inofanira kunge yakafunga kuti zvaive zvakakosha kuongorora zvimwe, nekuti, sekureva The Wall Street Journal, Vatungamiriri ve projekiti vakapeta katatu inonzi Apple Car timu kune vanhu mazana matanhatu. Apple yaifungidzirwa kunge iri kuwedzera kuedza kwekuvaka mota yemagetsi uye kutomisikidza yakatarwa ngarava gore ra600.
18 Gunyana 2015 - Apple ichaedza here muCalifornia?
Sekureva kweThe Guardian, Apple yakaita musangano nevakuru vekutyaira vekuCalifornia vakazvimiririra muna Nyamavhuvhu 2015. Izvi zvaifungidzirwa kuti zvakateedzera ongororo yekuwana nzvimbo yemauto isina kushandiswa nemigwagwa mizhinji yekuongorora mota kwakazvimiririra. Apple yakashandirawo maneja wechirongwa cheinjiniya - chimwe chinhu chinowanzoitika kukambani kana chirongwa chagadzirira kubva kubazi.
14 Nyamavhuvhu 2015 - Apple inotsvaga nzvimbo dzekuyedza
Apple yaitsvaga nzvimbo dzekuyedza mota inozvityaira, maererano neThe Guardian, iyo yakati yakadzidza ruzivo urwu kuburikidza neruzhinji zvinyorwa zvinyorwa chikumbiro. Mune imwe yeemail yakawanikwa kuburikidza nechikumbiro, injinjini yeApple yakabvunza GoMentum, zviuru zvishanu zvemaeka echechi, kuti "inzwisise nguva uye kuwanikwa kwenzvimbo iyi." Apple yakabvunzawo dhizaini / mapikicha enzvimbo.
20 Chikunguru 2015 - Apple inotora nyanzvi maindasitiri
Apple yakatora tekinoroji yemotokari uye nyanzvi dzekugadzira mota - kusanganisira mainjiniya emota - kuzoshanda ku "top-secret-lab lab yekutsvagisa", sekureva The Financial Times. Zvino, The Wall Street Journal akadaro Apple akabhadhara Doug Betts, uyo akamboshanda semutevedzeri mukuru mutevedzeri weChrysler Group, kwaaive mukuru wepasi rese wezvekutungamira achitungamira chigadzirwa sevhisi uye mhando.
Pamusoro pezvo, Apple yakanga yashandira aimbova Tesla mutevedzeri wemutungamiri weinjiniya yemotokari Chris Porritt, aimbove mainjiniya weAston Martin. Apple yakashandirawo Paul Furgale, mutevedzeri wemukuru weSwiss Federal Institute of Technology's Autonomous Systems Lab. Apple yanga ichitsvaga kunyangwe nyanzvi ne robhoti uye ruzivo rwemuchina, zvakare, naFurgale anofungidzirwa kutora vadzidzi vese nevatsvagiri
19 Kukadzi 2015 - Apple yakasangana neBMW here?
Mune mumwe mushumo kubva Reuters, zvakaratidzwa kuti magetsi-mota bhatiri anogadzira A123 Systems anga achimhan'arira Apple yekuuraya zvine utsinye mainjiniya ayo epamusoro kubva munaJune 2014. Aya mainjiniya aive ari kubatsira Apple kuvaka chikamu chikuru chebhatiri. Manger Magazini yakatozivisa kuti Apple yakasangana neBMW nekuti yaida kushandisa i3 mota sehwaro hwayo mota yemagetsi.
13 Kukadzi 2015 - Vanotora kuzoshanda muchivande lab
The Financial Times akawedzera kukwaya nekuzivisa kuti timu yevashandi veApple yaiongorora zvigadzirwa zvemotokari mubazi nyowani rekutsvagisa panzvimbo yakavanda padyo nepamuzinda weApple muCupertino. Chikwata ichi chaitungamirirwa nemaneja maneja kubva kuApple's iPhone unit. The Wall Street Journal yakayera pamusoro pekufungidzira kwese, kunyanya ichiwedzera kuti Apple yaigadzira mota yemagetsi yakatumidzwa Titan.
9 Kukadzi 2015 - Apple mushandi anoti ichapa Tesla 'kumhanyisa mari yayo'
Mumwe mushandi weApple asina zita Business Insider kuti Apple yaishanda pane chimwe chinhu "chinopa Tesla kumhanyisa mari yayo." Apple naTesla vaiyedzawo kutora vashandi vepamusoro kubva kune mumwe nemumwe, sekureva Bloomberg Bhizinesi, zvakadaro, panguva iyoyo, Tesla aikunda muhondo iyi, nekunzi akabata vangangoita 150 vaimbove vashandi veApple. Musk aive zvakare achizvikudza pachena nezvazvo.
MuBabhi: The Netgear XS724EM, 24-port 2.5G / 5G / 10GBase-T Shanduka